माओबादी आन्दोलनको एउटा अविस्मरणीय घडी र सुरुवाती दिन २०५२ फाल्गुन १ गते थियो जनयुद्ध अब इतिहास भयो विगत भयो । नेपाली जनता विश्वसर्वहावर्गको पहरेदारको रुपमा काम गर्दै आउने शिलशिलामा थुप्रै उत्पिडनका विरुद्ध लड्दै र जनताको सत्ता स्थापना गर्दै मालेमावादी विचारधाराबाट उत्पीडित नेपाली जनतालाई मुक्ती दिलाउने भर भरोसा देखाउदै २०६२-६३ को शान्तिप्रक्रियासम्म विरता, गौरब र कुशलतापूर्वक आइपुगेको थियो ।
जब माओबादी शान्तिप्रक्रियाको नाममा शान्ती र संविधान नभए बिद्रोहको द्वय चरित्र बोकेर शहर पस्यो त्यही शहरमै दिनप्रतिदिन भाका बदलिरह्यो कहिले बिद्रोह कहिले शान्ती र संबिधान नेतृत्वहरु यसैमा लुछाचुरी गरिरहे । उता क्यान्टोनमेन्टमा कैद गरिएका जनमुक्ति सेना अराजकता र आर्थिक कुमल्याउने होडमा तस्कर, दुई नम्बर धन्दा जस्ता कार्यमा ब्यस्त र मस्त देखिन्थे ।
माओवादी आदर्शबाटै नेतृत्वहरु नै स्खलित भएपछी तलका कमरेडहरुको के दोष? भन्ने तर्ककुतर्कहरु चलिरहेको थिए । पार्टीभित्र उपल्लो तहमा विचार संघर्ष चलिरहेको थियो । क्रान्तिमा फर्कने वा संसदीय ब्यबस्थाबाट नै राजनिती कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्नेमा पार्टी दुई ध्रुवमा बिभाजित नै बन्यो ।
क्रान्तिकारी ध्रुब र ससदवादी ध्रुब क्रान्तिकारी लाइनमा ठुलै पंक्ति देखियो भने संसदवादी लाइनमा प्रचण्ड सहित केही केही अमुक र जनयुद्ध भरी जनयुद्धको बिरोध गर्नेहरुको हालिमुहाली रह्यो। क्रान्तिकारी पंक्तिको जोड थियो । कि अब जनतामा जाउँ जनतासँग गरेका बाचा बन्धन अनुसार काम गर्न सकेनौं ।
पुनः जनतामा गएर साँचो कुरा जनतालाई भनौं भन्ने रह्यो भने अर्को हिस्सा अब जति गरिउ यति नै हो । राजतन्त्र अन्त्य गरियौ । संबिधान सभाबाट संबिधान जारी गर्दैछौं। क्रान्ति पनि यहि संसदिय ब्यबस्थाबाटै गर्नुपर्छ भन्दै माक्र्सवादको खिल्ली उडाउने र कार्यकर्ता, जनता सम्पुर्णमा भ्रम सिर्जना गरिरहे । अझ हास्यास्पद कुरा त के गरे भने अब राजनीतिक क्रान्ती सकियो । आर्थिक क्रान्तिको चरण हो भन्दै पुजिपती वर्गको सेवा गर्न पुगे । विदेशीको गुलामी गर्दै लम्पसारवादी बन्न पुगे ।
यो सबै दिल्ली सम्झौताको अभिष्ट थियो । आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने प्रवृति थियो । कार्यकर्ताहरु दिनप्रतिदिन निरास हुँदै कालापहाडमा कुल्ली काम गर्न हानिदै थिए । प्रचण्डलाई सत्तोसराप गर्दै । जनतामा बितृष्णा थियो । शहिदका आफ्न्तहरुमा पछुतो लाग्ने अवस्थाको जन्म भयो । बेपत्ताका आफ्न्तहरुबाट प्रश्न आउन थाले । हाम्रो मान्छे खै ? भनेर घाइतेहरु छटपाटाउन थाले हाम्रो उपचार कहिले भनेर ?
यस्तै यस्तै प्रश्ननका चाङ लागे तर नेताहरु आफ्नो धुर्त्याइ र लाचारिपना सँधै ढाकछोप गरिरहे । २०६९ सम्म आइपुग्दा माओवादी आन्दोलनका जेष्ठ ब्यक्तित्वद्वारा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने अठोट ब्यक्त भयो । तर त्यो पनि अवधी नपुगी जन्म दिएको शिशु जस्तै भयो । न त त्यो बामे सर्न स्क्यो न त त्यो ताते ताते बोल्न सक्यो । उनको अवस्था अहिलेसम्म पनि उहीँ छ । जडसुत्रबादको सिकार बनिरहेका छन् । आफ्नो पोजिसन बदल्न सकेका छैनन् ।
त्यहाँसम्म आउँदा केही कम्युनिस्टधारी मुकुन्डो पहिरिएर आएका अवसरवादी भुतहरु पनि अन्ततः त्यही संसदिय ब्यबस्थाकै मसानघाटमा हतार हतार फर्किए । अहिले सत्ताको रसातालमा डुबुल्की मारिरहेका छन् । वैद्य बा सँगको २ वर्षलाई कार्यकर्ताले खुबै पर्खियौं । तर क्रान्तिको स्पष्ट खाका आउन सकेन र अन्ततः त्यो बाध पनि फुट्यो। विचार संघर्षद्वारा नयाँ नेतृत्वको जन्म भयो ।
नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव र उहाँको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी पार्टीको पुनर्गठन जनमुक्ती सेनाको स्थापना दिवसको अवसर पारेर २०७१ मंसिर ८ गते काठमाडौंको खुल्लामन्चबाट लाखौं जनता हजारौं कार्यकर्ताको सहभागितामा पार्टी पुनर्गठन भएको घोषणा भयो । यो एक साहासिक र नेपाली जनता, नेपाल र विश्वसर्बहारा र श्रमिक जनताको आखिझ्याल बन्न पुग्यो । सहिद परिवार, बेपत्ताका परिवार, घाइते यौद्दाहरुको माओबादी घटकहरुको उर्जाको खुराक बनेको छ । क्रान्तिकारीहरु एक चोटि मुर्दाघाटबाट ब्युझिएका छन् ।
प्रतिक्रियावादीहरु कानेखुसी गर्दै मलिनो अनुहार लागाएर थरथराइरहेका छन् । एकीकृत जनक्रान्तिको कर्यदिशा आठौं औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा थुप्रै बहस र क्रिया अन्तरक्रियाबाट विज्ञान सम्बत प्रमाणित गर्दै एक हजार प्रतिनिधि, प्रवेक्षेकद्वारा इजाजत पाइसकेको छ । राजनैतिक कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ती रहयो भने । न्युनतम राजनैतिक कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद भएको छ ।
आजको बिश्वको चरित्र राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, प्राबिधिक क्षेत्रमा भइरहेको चमत्कारिता सुचना प्रबिधिमा आएको अभुतपुर्व विकास र भु मण्डलीकृत साम्राज्यवादको विशेषता सबैमा गहिरो गृहकार्य गरेर कार्यदिशाको सम्वृदिकरण भयो । पार्टी पुनर्गठनदेखि यहाँसम्म आउँदा छैठौं बर्षमा प्रबेश भयो । क्रान्तिका विभिन्न चरण उपचरण यी अवधीसम्म चलिरहेको छ ।
बलिदानीको श्रृङखला सुरु भयो । राज्यद्वारा क्रान्तिकारीहरुमाथी अघोषित प्रतिबन्ध लाग्यो । तर क्रान्तिकारी झापटद्वारा प्रतिक्रियावादीहरुलाई निस्तेज पार्ने ताकत कहिल्यै गलेन । बरु झन स्पात भयो । यतिबेला राज्य सत्ताको चरित्र दलाल पुजिवाद रहेको छ । यसको नेतृत्व नामधारी सुधारवादि कम्युनिस्टहरुले गर्न पुगेका छन् ।
तर बिडम्बना क्रान्तिकारीहरु देखि डराउने ताकत सच्चा क्रान्तिकारीहरुमा पाएपछी जनताको नजरमा आफ्नो घृणित कार्य उदाङ्गिएपछि जनतासँगको क्रान्तिकाहरुको समिप्यता तोड्न र लुटको स्वर्ग जोगाउनको लागि २०७५ फाल्गुन २८ गते देखि घोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भोजपुरमा तिर्थ घिमिरे, सर्लाहीमा कुमार पौडेल, ओखलढुंगामा निरकुमार राईमाथी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ ।
क्रान्तिमा रक्तरंगना सुरु भएको छ । आन्तरिक दुर्घटनामा परि कमरेड महान लगायतका कमरेडहरुको शहादत भएको छ । राज्य निरीह बनेको छ । हामी जनतामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका मुद्दा लिएर जनता, बुद्धिजीवि, राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिसंग सहकार्य गरिरहेका छौं । हामी परिवर्तनको पक्षमा छौं ।
अधुरा क्रान्ती पूरा गर्ने लक्ष्यमा छौं । राज्य युद्धमा धकेल्न चाहन्छ । हामी शान्तिपूर्ण आवाजद्वारा जनताको हित हुने ब्यबस्था प्राप्तिको खोजिमा छौं । शासकहरु क्रूर बन्न बाध्य पार्दै छन् । अन्तमा छैठौं वर्षसम्मका यी यात्रा निकै उतारचढावपूर्ण रहे पनि राजनैतिक दृष्टिले फाइदाजन नै रहे ।
वर्ग दुश्मनको कित्ताबन्दी भएको छ । लेखक, विश्लेषक, नागरिक अगुवा, कानुन ब्यबसायी, देशभक्त कर्मचारी युवा विद्यार्थी, कलाकार, साहित्यकार, राजनीतिकर्मिमा एउटा बहस सिर्जना भएको छ । प्रतिबन्ध विरुद्ध बहस चलिरहेको छ । तर उनीहरु आफ्नो दानवीय हत्कण्डा फिर्ता लिन सकिरहेका छैनन् ।
पार्टी पुनर्गठनको यो घडिसम्म आइपुग्दा हजारौं कमरेडहरु जेल, हिरासतभित्र मोर्चाबन्दी गरिरहुनु भएको छ । उहाँहरुप्रती सम्मान छ । लाखौं जनता रोग, भोग, बेरोजगारी, अन्याय, असमनताको चपेटामा परिरहेका छन् । यो दर्दनाक पिडालाई मुक्ती दिने एकीकृत जनक्रान्तिद्वारा नै सम्भव छ भन्ने बुझाइ हामी सबैमा जाग्नु पर्दछ। विचार कार्यदिशा सही छ भने नभएका चिज पनि प्राप्त हुन्छ ।
विचार कार्यदिशा गलत भए भएको चिज पनि गुम्छ भन्ने सच्याइलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । दलाल पुजिवाद निर्बिकल्प ब्यबस्था होइन बैज्ञानिक समाजवाद अनिवार्य हो । दलाल पुजिवादको बिकल्प बैज्ञानिक समाजवाद हो ।
प्रकाशित मिती २०७६ मंसिर ८ गते